Waa maxay Luuqadda Barnaamij-samaynta ugu Fiican ee lagu barto 2021? | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waa maxay Luuqadda Barnaamij-samaynta ugu Fiican ee lagu barto 2021?
Waa maxay Luuqadda Barnaamij-samaynta ugu Fiican ee lagu barto 2021?
Markaa ma rabtaa inaad noqoto horumariye? Hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee la baran lahaa barnaamijka. Mushaarku aad buu u sarreeyaa, baahida shaqadu waa sii kordhaysa, luuqad cusub oo xiiso leh oo codayn ah ayaa ka sarreysa qiimeynta caanka ah sannad kasta.
Laakin waa kuwee luuqada barnaamijka ugu fiican ee la barto? Haddii aad tan ku cusub tahay, waxa jira doorashooyin badan oo aad ka dooran karto, taas oo adkeynaysa in la ogaado meesha laga bilaabo.
Luqadaha barnaamijka si joogto ah ayey u kobcayaan—marka mid ka mid ah dhinto, waxaa lagu beddelaa wax cusub oo weyn. Haddii aad waqti fiican ku qaadato, waxaad u taagan tahay inaad hesho lacag badan. Ama waxaad raaci kartaa luqadaha la tijaabiyay ee la tijaabiyay ee u istaagay tijaabada waqtiga.
Waxaas oo dhami waa ku filan tahay inaad madaxaaga miiqdo. Luuqaddee programming ka ugu fiican in la barto? Kee bixiya mushaharka ugu sarreeya? Ma u fududahay in ay bilaabaan waxbarashada? Liiskani wuxuu kugu hagi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xulashada luqadda barnaamijyada ugu fiican ee aad barato.
Waa maxay Noocyada Kala Duwan ee Barnaamijyada Luuqadaha?
Qaar ka mid ah tignoolajiyada horumarinta shabakadda ee ugu caansan ee la barto
Luuqad kasta oo programming ka ah way ka duwan tahay. Iyadoo luuqad kasta oo barnaamij-samayntu leedahay syntax u gaar ah, sida loo qoro, loo socodsiiyo, iyo sida loo ururiyey ayaa wax walba beddeli karta.
Horumariyayaal badan ayaa door bida inay la shaqeeyaan noocyada luqadaha qaarkood. Waxa kale oo aad u fudud inaad u guurto luqadaha isku midka ah, markaa luqadda barnaamijka ugu horreysa ee aad ku barato arrimaha.
Haddaba waa maxay noocyada kala duwan ee luuqadaha barnaamijka? Ma jiraa farqi u dhexeeya qorista iyo luuqadaha barnaamijka? Bal aan eegno.
Luqadaha barnaamijka Waxay noqon karaan wax kasta, laakiin waxay inta badan ku fiican yihiin horumarinta software sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan waxayna u muuqdaan in la ururiyo halkii la tarjumi lahaa. Inta badan luuqadaha barnaamijka waxaa loogu talagalay horumarinta software-ka, si loo horumariyo barnaamijyada aad soo dejisato oo aad ku shaqeyso qalabkaaga.
Luqadaha qoraalka waa caksi. Inta badan waa la tarjumaa, taas oo macnaheedu yahay in koodkoodu ku socdo duullimaad halkii ay ka mari lahaayeen hab ururin gudaha barnaamijka. Luuqadaha horumarinta mareegaha ayaa inta badan ah luuqado qoraal ah.
Luqadaha calaamadaynta maahan luqadaha barnaamijyada sida saxda ah, laakiin waxaa loo isticmaalaa horumarinta shabakadda. Kuwani waa sumado ay dadku akhriyi karaan oo loo isticmaalo qaabaynta dukumeentiga.
Luuqadaha horumarinta shabakada waxay ku takhasuseen abuurista mareegaha, ha ahaato dhinaca hore ama xagga dambe.
Afafka dambe (ama dhinaca server-ka) ka beddel goob server-ka ama lakabka codsiga. Tusaale ahaan, gudbinta xogta foomka, ama beddelka shay ku jira kaydka xogta, waa barnaamij-samaynta.
Waa inaad sidoo kale ogaataa in dad badani ay isticmaalaan "afafka barnaamijka" si ay u tixraacaan dhammaan luqadaha codaynta guud ahaan. Luqadda qoraalku waa luuqad barnaamij gaar ah, laakiin dhammaan luuqadaha barnaamijka ma aha luqadaha qoraalka.
Dhammaan luqadaha hoos ku qorani maaha kuwo barnaamijka ku hadla macnaha ugu adag, laakiin dhammaantood waxa loo adeegsadaa codaynta.
Waa waqtigii la quusin lahaa!
Markaa ma rabtaa inaad noqoto horumariye? 👩‍💻 Geli wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato oo ku saabsan luuqadaha barnaamijka, iyo keebaa ugu fiican jidkaaga shaqo, halkan ⬇️Riix halkan Tweet
HTML iyo CSS
HTML5 iyo CSS3 logos
In kasta oo HTML iyo CSS aysan ahayn luqadaha barnaamijaynta farsamada, HTML5 iyo CSS3 ayaa ah meelaha ugu habboon ee aad ka bilaabi karto haddii aad rabto in aad noqoto horumariye shabakadeed-dhamaadka hore. Labadani waxay ka kooban yihiin dhismaha bog kasta, oo leh HTML habaynaya waxa ku jira bogga, iyo CSS habaynta iyo wax ka beddelka qaabkaas.
HTML iyo CSS waa meel aad u fiican oo horumariye kasta ah. Iyadoo HTML ay tahay luuqad si sahlan loo baran karo, CSS waxay kugu xujaynaysaa xoogaa ka badan, laakiin ma ahan wax aad u adag in la qaato midkoodna.
Platform Horumarinta webka Frontend.
Dhibaato HTML waa mid toos ah in la barto; CSS sidoo kale si macquul ah waa u fududahay in la barto.
caanka #12 oo ku saabsan luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 54% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $64k/sanadkii, marka loo eego PayScale. Sidoo kale, hubi celceliska mushaharka naqshadeeyaha shabakada.
Faa'iidada Waxaa si dhab ah looga baahan yahay inuu noqdo horumariye shabakadeed hore. Aad bay u fududahay in la barto, xitaa dadka aan khibrad barnaamijeed lahayn. Caannimadeeda sare waxay ka dhigaysa helista kheyraadka bilaashka ah mid sahlan. Si wanaagsan loogu taageeray dhammaan aaladaha
Qasaaraha Kuma siinayso mushahar aad u sarreeya sababtoo ah waa wax looga baahan yahay dhammaan shaqooyinka horumarinta shabakadaha hore. Arrimaha isdhaafsiga ayaa had iyo jeer walaac leh.
Platform Qoraalka hore Si dhif ah loo isticmaalo horumarinta mobilada/software.
caanka Aad loo jecel yahay, oo inta badan gacanta ku haya HTML iyo CSS. #3 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #7 ee TiOBE Index ee Febraayo 2021. #6 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 58% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $83k/sanadkii, marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee loo codeeyo qoraalada dhinaca macmiilka ah ee ku dhex shaqeeya browserka. Luuqad barnaamijeed aad loo jecel yahay. Taageero ballaadhan oo dhan codsiyo kala duwan. Waxay si dhab ah u awood u leedahay inta badan shabakadaha casriga ah, oo ay ku jiraan tan.
Qasaaraha Waxa laga yaabaa inay adag tahay in la barto kuwa kaliya ee yaqaan luqadaha calaamadaynta. Waxay leedahay arrimo la xiriira amniga iyo xasilloonida browserka.
PHP waa luqadda lagu doorto mashaariicda waaweyn, gaar ahaan WordPress laftiisa. Waxa ay mar kala qaybisay bulshada horumarisa iyadoo ay ugu wacan tahay dib u dhac iyo gaabis, iyo qaar badan ayaa wali aaminsan in aanay u qalmin wakhtiga wax lagu barto.
Si kastaba ha noqotee, PHP ayaa ku soo laabtay qaab tan iyo PHP 5.x oo leh horumarin badan oo xagga xawaaraha iyo qaabdhismeedka ah. Marka loo eego W3Techs, 79% mareegaha ay sahamiyeen waxay isticmaalaan PHP.
Hal shay ayaa cad — waa hab awood leh oo lagu codeeyo codsiyada dhinaca server-ka ah, marka la barbardhigo luqadaha kale ee qoraalka, waa dadaal in la barto. Caannimadeeda ka dhex jirta barnaamijyada cusub iyo baaxadda mashaariicda il furan sida WordPress waxay la macno tahay in sidoo kale ay jiraan ilo badan oo waxbarasho.
Daraasiin qaab-dhismeedka PHP ah oo caan ah sida Laravel ayaa jira, kaas oo ka dhigi kara codeeynta shaqadaada PHP xitaa mid sahlan. Markii la bilaabay PHP 8.0, PHP waxa ay isku dayaysaa in ay ka go'do in ay noqoto af qoraal-qoraaleed oo kaliya si ay u noqoto barnaamij ujeedo guud ah.
Platform Qoraalka webka dhabarka dambe.
Dhibaato Way fududahay in la barto, gaar ahaan kuwa bilowga ah.
caanka #6 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #8 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #13 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 37% horumariyeyaasha StackExchange 2020 (laakin waxaa ka cabsanaya 63%!)
Mushaharka celceliska $65k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Aad bay u fududahay in la barto. Si wanaagsan u dhisan horumarinta shabakadda oo caadi ahaan laga helo mareegaha internetka. Noocyada casriga ah ayaa si macquul ah u dhaqso badan. Si fudud shaqo loogu heli karo sidii horumariye PHP ah.
Qasaaraha Caannimada ayaa hoos u dhacaysa marka loo eego luqadaha cusub ee kulul sida Python. Horumariyayaal badan ayaan u arag in ay shaqayn karto.
MySQL iyo MariaDB waa xog ururinta SQL ee caanka ah
Ujeedada koowaad ee SQL waa in lala dhexgalo xogta mareegaha. Nidaamyada maareynta xogta ee kala duwan sida MySQL, MariaDB, SQLite, iyo PostgreSQL ayaa jira si ay kaaga caawiyaan inaad wax ka qabato, laakiin dhammaantood waxay isticmaalaan luqadda SQL.
Platform Backend maamulka xogta.
Dhibaato Si dhexdhexaad ah u fududahay in la barto kuwa leh aqoonta barnaamijka. Waxay noqon kartaa mid aad u adag haddii loo isticmaalo hawlaha horumarsan.
caanka #9 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #15 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxa jecel 57% horumariyeyaasha StackExchange ee 2020.
Mushaharka celceliska $74k/sanadkii, marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Awood leh oo xamili kara xog badan. Baahida sare, maareynta xogta xogta ayaa looga baahan yahay ku dhawaad ​​shabakad kasta.
Qasaaraha Waxay noqon kartaa mid adag in la barto. Wax ka qabashada xogta kaydsan waxay noqon kartaa caajis.
Luqadda asalka ah ee C weli waa la adeegsadaa maanta, laakiin inta badan horumariyeyaasha casriga ah waxay u wareegeen C++. Luuqadda barnaamijka ujeedo-guud waxa ay caan ku tahay in ay noqoto mid wax-ku-ool ah; waxaad isticmaali kartaa si aad u sameysid codsiyo nooc kasta ah.
Barnaamijyada kumbuyuutarka, barnaamijyada mobilada, ciyaaraha fiidiyowga, nidaamyada hawlgalka, daalacashada oo dhan, xitaa horumarinta shabakadda ilaa xad - haddii aad wax ka fikiri karto, C++ ayaa samayn kara. Oo si degdeg ah ayay u socon doontaa.
Platform Inta badan horumarinta software; waxaa loo isticmaali karaa xaalado kala duwan.
Dhibaato Aad bay u adag tahay in la barto, gaar ahaan kuwa bilowga ah.
caanka #5 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #4 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #4 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 43% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $70k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Kala duwanaansho saafi ah. Waxaad u isticmaali kartaa runtii wax kasta. Xirfaduhu waxay si fiican ugu turjumaan luqadaha kale. Degdeg ah oo awood leh.
Qasaaraha Ma aha luqadda koowaad ee saxda ah ee wadarta bilowga ah. Si cajiib ah u adag oo ay ugu wacan tahay in uu duqoobay oo si caalami ah loo isticmaalo. Aan ku habboonayn horumarinta shabakadda
C # sumadda
Iyadoo C++ ay tahay balaadhinta tooska ah ee C, C # si fudud ayaa loo waxyooday. Sida C++, C # waxaa loo yaqaanaa inuu yahay mid casri ah, oo nooc ka badan oo la taaban karo oo asal ah, luqad duug ah. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin labadaas?
Mid ka mid ah, C # aad bay u fududahay in la barto. Way ka sahlan tahay oo ka adag tahay laakiin weli waa loo isticmaali karaa in lagu abuuro codsiyo kala duwan oo kala duwan. Waxa kale oo aad uga fiican horumarinta shabakadda C++. Aad bay caan ugu tahay horumarinta ciyaaraha waxayna dhex fadhidaa luuqadaha mushaharka ugu sarreeya.
Labadan midkee baad dooranaysaa? Waxay ku xiran tahay. C++ ayaa ka fiican haddii aad u baahan tahay koronto cayriin. C # waa ka sahlan yahay oo si sahlan in lagula shaqeeyo, laakiin weli waa xal la taaban karo.
Platform Inta badan software iyo horumarinta webka.
Dhibaato Si dhexdhexaad ah u fududahay in la barto.
caanka #4 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #5 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #7 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 60% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $68k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Marka la barbardhigo way fududahay in la barto, gaar ahaan marka la barbar dhigo C++. Kala duwan Waxaad u isticmaali kartaa siyaabo kala duwan oo kala duwan.
Qasaaraha Uma xoog badan ama ugu dhakhsaha badan sida C++.
Calaamadda degdegga ah
Ilaa hadda sida iOS iyo macOS horumarinta u socdaan, Swift waa heerka dahabka. Waa mid casri ah, degdeg ah, oo amniga diiradda saaraya. Dhammaan waxa sababay in ay ku qaraxdo caannimada. Horumariyayaashu waxay jecel yihiin inay ku bar-gareeyaan maadaama ay dadaal la'aan tahay in wax lagu qoro, sidaa darteed waxaa lagu maareeyay inay keligeed ka dhigto horumarinta iOS.
Haddii aad qorsheyneyso inaad horumariso barnaamijyada ama barnaamijyada aaladaha Apple, Swift waa luqad barnaamij aad u fiican oo lagu bilaabo.
Platform IOS iyo macOS horumarinta.
Dhibaato Marka la barbardhigo way fududahay in la barto.
caanka #9 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #15 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #9 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 60% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $105k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Nadiifi code oo leh horumar degdeg ah. Luuqada ugu caansan ee iOS.
Qasaaraha Taageero iskutallaab ah oo aad u yar. Ku soo koraya caannimada, laakiin weli waxaa loo tixgeliyaa luqad dhalinyaro ah.
Haddii Swift ay tahay luqadda doorashada ee horumarinta iOS, markaa Kotlin waa luqadda koowaad ee Android. Ujeeddadeedu ma aha inay noqoto mid gaar ah ama soo jiidasho leh, laakiin taa beddelkeeda waxay ka soo jiidataa dhiirrigelinta luqadaha aad hore u taqaannay - taasi waa waxa ka dhigaya inay jecel yihiin horumariyayaashu.
Waxa kale oo gebi ahaanba la wada shaqayn kara Java, taas oo ka dhigaysa beddel toos ah. Laakin si ka duwan Java, oo caannimada xoogaa hoos ugu sii dhacaysa, Kotlin waa uun koraya, waana luuqad tartan ah oo la baranayo.
Platform Hormar Android, laakiin sidoo kale horumarinta webka iyo software.
caanka #12 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #24 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 63% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $100k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Luuqad aad u fiican oo loogu talagalay horumarinta Android iyo sidoo kale ujeedooyinka guud. Luuqad si fudud loo baran karo oo koraysa. La shaqaynta Java.
Qasaaraha Ka cusub oo ka caan yar Java, sidaas awgeed kheyraad yar ayaa laga heli karaa onlayn.
miridhku waa luuqad barnaamijeed ku dhawaad ​​laga jecel yahay caalamka. Siyaabo badan, waxay la mid tahay C++. Waxaa loogu talagalay inay noqoto mid adag oo degdeg ah, waxaadna u isticmaali kartaa mashaariic kala duwan.
Naqshaday Graydon Hoare ee Mozilla Research, Rust waxaa si cad loo sameeyay si loo xalliyo dhibaatooyin badan oo la socda luqado kale. Markaa haddii aad la halgamayso tignoolajiyada hore sida Java iyo C++, Rust waxa laga yaabaa inuu noqdo kan ugu habboon.
Platform Inta badan software iyo horumarinta codsiyada, laakiin waxaad u isticmaali kartaa wax kasta.
Dhibaato Loo tixgeliyey inay adag tahay in la barto.
caanka #16 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #17 ee luuqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxa jecel 86% (!) horumariyayaal StackExchange ee 2020 (2016, 2017, 2018, iyo 2019). Ka cabsada ugu yar luqad kasta.
Mushaharka celceliska $115k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Awood leh, degdeg badan, oo hufan. Awood u leh in loo isticmaalo xaalado kala duwan oo kala duwan. Jecel by barnaamijyada.
Qasaaraha Ka adag luqado kale oo badan, aad u adag in lagu koodka koodka ku qoro sidoo kalena ay adag tahay in la barto.
Ma u baahan tahay xawaare-dhakhso leh, ammaan ah, iyo soo-saare-saaxiibtinimo martigelinta goobaha macmiilka? Behmaster waxaa la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo horumariyayaal waxayna bixisaa qalab badan iyo dashboard awood leh. Eeg qorshayaashayada
Waxay haysataa ku dhawaad ​​wax kasta oo aad ku waydiisan karto luqadda barnaamijka: kala duwanaansho, xawaare, iyo hufnaan. Waxaa dheer, aad bay u fududahay in la barto.
Haddii kartida iyo caannimada keligood ay ku filan yihiin in lagu dhiirigeliyo, Python waa midka la dooranayo. Ma jirto baahi loo qabo hadda.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato sida loo barto Python, akhri boostadayada sida ugu fiican Casharrada Python.
Platform Horumarinta shabakada iyo software.
Dhibaato Si fudud wax loo barto.
caanka Python si caan ah ayey u qaraxday dhowrkii sano ee la soo dhaafay. #1 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #3 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #1 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 67% horumariyeyaasha StackExchange 2020, waxaana rabey 30%, inta ugu badan mid kasta luqadda.
Mushaharka celceliska $79k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Waxaa loo isticmaali karaa si qurux badan meel kasta, laga bilaabo codsiyada webka ilaa horumarinta software ilaa abuurista ciyaarta. Iskutallaab-madax. Caannimada sare waxay ka dhigan tahay kheyraad badan iyo xitaa shaqooyin badan.
Qasaaraha Si ka gaabis ah luqadaha kale. Aqoonta Python si fiican uguma tarjunto nidaamyada kale.
Ruby waa wax walba oo ku saabsan fududaanta. Qalabkeeda xarrago leh way fududahay in lala shaqeeyo waxaana loogu talagalay inay noqoto mid aan xanuun lahayn intii suurtogal ah, waxayna ka shaqeysaa horumarinta hore iyo gadaalba. Luqadda Ruby waxay si dhab ah ugu qoran tahay Ingiriisi, markaa waa dugsi hoose in la barto hab-raaciisa.
Laakin ha ku kadsoomin muuqaalka fudaydka. Ruby waxaa laga yaabaa inaysan ahayn luqad awood ceyriin ah, laakiin waxay si fiican u qabataa shaqada.
Platform Inta badan horumarinta webka hore iyo gadaal.
Dhibaato Aad bay u fududahay in la barto.
caanka #15 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #14 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #17 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 43% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $78k/sanadkii, marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Nadiifi, code hufan. Luqadda doorashada ee horumarinta shabakad aan dadaal lahayn (gaar ahaan qaabka Ruby on Rails). Bulsho weyn oo firfircoon.
Qasaaraha Aan u dabacsanayn ama u caan ahayn sida luqadaha kale.
Java waxa ay dareema in uu awoowe u yahay luuqadaha codaynta oo dhan, laakiin xataa sida C++ maaha da'da dhabta ah. In kasta oo ay dad badani u haystaan ​​in ay duugowday, haddana waxa laga isticmaalaa adduunka oo dhan iyo dhammaan noocyada aaladaha.
Python way dhaaftay oo guud ahaan hoos ayay u dhacday caannimadiisa, laakiin Java hubaal ma dhiman. Waxaa jira kumanaan shaqo oo loogu talagalay horumarinta dhabarka Java, iyo baahida ayaa weli ah mid sare, taasoo ka dhigaysa doorasho la isku halayn karo.
Platform Software/Codsiga, Shabakadda, iyo Horumarinta Mobaylada.
Dhibaato Way adag tahay in la soo qaado.
caanka In kasta oo ay tahay luqad da' weyn oo ka dhacday sumcadda sannadihii la soo dhaafay, Java ayaa weli ah tartanka ugu sarreeya ee caannimada. #2 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #2 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #2 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxa jecel 44% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $75k/sanadkii marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Iskutallaab iyo ujeedo guud. Muddo dheer oo caan ah inkasta oo ay da' tahay. Amniga sare.
Qasaaraha Way adag tahay in la barto. Waxqabad xumo. Isbeddellada caanka ah ee ku wajahan hoos u dhaca.
Si la mid ah Kotlin, Scala waxaa loo sameeyay in lagu beddelo Java iyo arrimo badan. Waa luqad awood leh, ujeeddooyin badan leh, laakiin aad u kooban. In kastoo aad u isticmaali karto isla nidaamyada Java, waxaa inta badan loo adeegsadaa habaynta xogta iyo barashada mashiinka.
Inkastoo aysan ku qarxin sumcad la mid ah luqadaha kale, haddana waxaa jira wax badan oo suurtagal ah oo tan ah.
Platform Inta badan horumarinta software/application.
Dhibaato Kakan oo ay adagtahay in la barto.
caanka #18 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #18 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 53% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Mushaharka celceliska $117k/sanadkii, marka loo eego PayScale.
Faa'iidada Hadal yar oo ka kooban Java. Aad u xoog badan waxaana loo isticmaali karaa meel kasta.
Qasaaraha Sida Java oo kale ay u adag tahay in la barto. Ma aha luqadda saxda ah ee barnaamijyada markii ugu horeysay.
Ugu dambeeya waa Go, oo ah Java iyo C++ beddelka ah oo ay samaysay Google. Waxqabadku waa waxa ugu wanagsan, isaga oo meesha ka saaraya wakhtiyo badan oo la isku ururiyey oo aafeeyey luqado kale oo badan. Waa isku mid, ka shaqaynta gadaasha maadaama ay qabato hawlo badan hal mar.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa xawaaraha ugu badan uusan ahayn yoolkaaga kaliya, luqadaha kale waxay si wanaagsan u fulin karaan inta badan waxa Go uu qabto. Mar walba ma cadda waxa saxda ah ee ay tahay inaad u isticmaasho Go. Weli, horumariyayaashu way jecel yihiin, caannimadeedana way sii socotaa inay koraan. Tusaale ahaan, MailHog, agabka tijaabada iimaylka isha furan ee awooda DevBehmasterHabka tijaabada iimaylka maxalliga ah, waxaa lagu dhisay luqadda barnaamijka Go.
Platform Inta badan horumarinta shabakadda.
caanka #13 gudaha Tusmada caanka ah ee PYPL ee Febraayo 2021. #13 ee Tusmada TIOBE ee Febraayo 2021. #10 ee luqadaha IEEE ee ugu sarreeya 2019. Waxaa jecel 62% horumariyeyaasha StackExchange 2020.
Faa'iidada Aad u fudud oo degdeg ah. Xalka casriga ah ee dhibaatooyinka barnaamijyada caadiga ah.
Qasaaraha Luqad cusub, markaa agabku waa gabaabsi. Fududnaanta ayaa ka dhigaysa mid dabacsan.
Luuqaddee Programming-ka ugu Wanaagsan?
Ma jirto jawaab cad oo ku saabsan luqadda codaynta ugu fiican. Mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo xumaantiisa wuxuuna ku iftiiminayaa xaalado kala duwan. Laakiin marka ay timaado qaybo gaar ah, waxaa jira dhawr guuleyste oo cad. Kuwani waa luqadaha ugu wanaagsan:
Bilowga: Si aad u hesho luqadaha ugu fudud ee wax lagu barto, xitaa haddii aadan khibrad u lahayn gabi ahaanba, ku bilow HTML/CSS, Go, Ruby, PHP, ama Python.
Soosaarayaasha software: C++ shaki la'aan waa kan ugu awooda badan. Laakiin ha illoobin Rust, Python, Scala, ama C #. Dhammaan waxay kuxirantahay software-ka aad dhisayso.
Horumarinta mobilada: Swift ayaa ugu fiican iOS, iyo Kotlin ee Android. Laakin luuqadaha guud-ujeeddada sida C++ iyo Java si fiican ayey u shaqayn karaan.
Mushahar sare: Swift, Rust, Scala, Kotlin, iyo Go waxay kaa caawinayaan inaad hesho ilaa $100k/sanadkii, iyadoo Scala iyo Go ay soo saarayaan mushaharka ugu sarreeya. Sidoo kale, hubi mushaharka horumarinta jagooyinka kala duwan.
Fahmidda: C++ waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu weyn ee dabacsanaanta, laakiin Rust, Java, Scala, Kotlin, iyo Python dhammaantood waxay si fiican u shaqeeyaan oo iskutallaab ah iyo xaalado kala duwan.
Laga bilaabo fursadaha shaqo ee fog Talaabada kowaad? Akhrinta hagahan ⬇️Riix halkan Tweet
Ka qaadashada hal luuqad barnaamijeed liiska maaha hawl fudud. Laakiin haddii aad taqaan waxaad rabto inaad samayso iyo meesha aad ka bilaabayso, aad ayay u fududahay inaad liiskaas u kala saarto dhawr ka mid ah murashaxiinta ugu fiican. Taasi waa run haddii aad rabto luqadda "ugu kulul", kan ugu mushaharka fiican, ama kaliya kuwa ugu fudud in la barto.
Barashada sida barnaamijka loo sameeyo waxay kuu sahlaysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu dabacsan ee aad heli karto, taasoo kuu ogolaanaysa inaad meel fog ka shaqeyso oo aad doorato tignoolajiyada aad doorbidayso. In kasta oo uusan jirin luqad barnaamijeed mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhammaantood, riixitaanka jihada saxda ah ayaa kaa caawin karta inaad doorato midka saxda ah.
Miyaynu ka baaqnay luuqad kale oo barnaamij ah? Waxaan jeclaan lahayn inaan fikradaada ku maqalno qaybta faallooyinka ee hoose. Baadhid Behmasterbogga shaqada ee barnaamijyada iyo fursadaha shaqo ee farsamada la xiriira.
Isbeddellada Dejinta Ololaha Saamaynta Xayeysiiska Google
10ka ugu Fiican ee Miiska Caawinta ee WordPress si loo Maareeyo Taageerada